आजका लागि यी ४ राशिलाई दुर्लभ संयोग बन्दै, पढेर सेयर गर्नुहोस आजको राशिफल- आजमिति २०७५ साल कार्तिक २६ गते सोमबार - सुदूरखबर डटकम
आजका लागि यी ४ राशिलाई दुर्लभ संयोग बन्दै, पढेर सेयर गर्नुहोस आजको राशिफल- आजमिति २०७५ साल कार्तिक २६ गते सोमबार
वि.सं. २०७५ कार्तिक २६ गते सोमबार तदनुसार ई. सं. २०१८ नोभेम्बर १२ तारिख, विरोधकृत् नामक संवत्सर, शाके :– १९४०, सूर्य दक्षिणायन, शरद् ऋतु, ने.सं. :– ११३९, (कछलाथ्व), काठमाण्डौ, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०६:२३ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०५:११ बजे, इटहरी, सुनसरी, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०६:१४ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०५:०५ बजे, पोखरा, कास्की, नेपालमा सूर्योदय : बिहान ०६:२९ बजे र सूर्यास्त : साँझ ०५:१६ बजे, कार्तिक शुक्लपक्षको पञ्चमी तिथि, मध्यरात्रीपछि ०१:०८ बजेसम्म, त्यसपछि षष्ठी तिथि, पूर्वाषाढा नक्षत्र, मध्यरात्रीपछि ०२:५४ बजेसम्म, त्यसपछि उत्तराषाढा नक्षत्र, चन्द्रमा धनु राशिमा (अहोरात्र व्याप्त), धृति योग, साँझ ०४:१४ बजेसम्म, त्यसपछि शूल योग, बब करण, दिउँसो १२:१२ बजेसम्म त्यसपछि बालब करण, आनन्दादि योग : उत्पात, चन्द्रवर्ण : पहेंलो, चन्द्रदिशा : पूर्व, योगिनीदिशा : दक्षिण, वारशूल : पूर्व,
आगामी ३ दिनभित्र पर्ने चाडपर्व र उत्सव तथा शुभ मूहुर्त : भोलिको चाडपर्व र उत्सव : छठ पर्व, डाला पूजा, २८ गते : त्रिपुष्कर योग बिहानको राती ०२ बजेर ५८ मिनेटदेखि बिहान ०५ बजेर १८ मिनेटसम्म, बैतडीको शिलंगामा महारुद्र कोटिहोम मेला, विश्व मधुमेह दिवस, २९ गते : अष्टमी व्रत, गोरखकाली पूजा, गोपाष्टमी, मुखाष्टमी,
युवा ज्योतिष सुजल श्रेष्ठ, ज्योतिष परामर्श केन्द्र पाटन दरबार, (भीमसेन मन्दिरको ४ घर उत्तर दिशा) ललितपुर नेपाल । सम्पर्क फोन नं. ०१ – ५५४२९५८, मोबाईल ९८४१७६३५५९ । सुरु गरौँ आजको राशिफल । शुरु गरौ आजको राशिफलबाट
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) – आफ्नो सहकर्मी आदिहरुको माया लाग्नेछ । उनीहरुको काम आदि नै आफुले गर्ने मन होला । गुरुजनको सुझाव फलदायी होला त्येसैले आफ्नै मन खुसि मात्र नगर्नु होला । चुनौती पन्छाउँदै अघि बढ्न सकिनेछ । नाति नातिना आदिलाई गर्नु पर्ने कामहरु गर्न सकिएला । पराक्रमद्वारा असाद्द्य कामहरु पनि बन्ला । खेलकुद आदिमा समावेश हुन धेरै मन हुन सक्छ । परिवारमा सबैलाई माया बाँड्न प्रयास गर्ने मन होला । तपाइको रासी मेस हो जुन मंगल ग्रहको रासी हो त्यसैले मंगल ग्रहको रंग जस्तै रातो, कलेजी राम्रो हुन्छ ।
बृष (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) – रोग आदि भए त्यसको समाधान गर्न सकिएला वा काम गर्न सकिएला । नौलो नौलो परिस्थितीहरु आउला । त्यसैले उत्साहित महसुस होला । मेहनत गर्दा अहिले नभएपनि पछि आम्दानी बढाउनेछ । सर सामानहरु मिलाउनु पर्ने समय आएको छ । बोल्ने बानीले सबैलाई समेट्ने प्रयास गर्नुहोला । अरुले त्यतिकै फसाउन सक्छन् । मन नभएको काम कुरामा लाग्नु पर्ला । ऋण आदि लाइ तिर्न सक्ने माहोल बनेको छ । मिलि काम गर्ने मान्छेहरुबाट धन पाउने छ । कुनै पनि बिग्रेको कुरालाई बनाउन सकिएला । तपाइको रासी बृष हो जुन शुक्र ग्रहको रासी हो त्यसैले शुक्र ग्रहको रंग जस्तै सेतो, उज्यालो रंग, फिक्का राम्रो हुन्छ ।
मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) – स्वास्थ्य सबल रहनेछ, तर बिस्तारै अलि कमजोरी होला । चाहिने भन्दा धेरै जोश र जागरले भरिभराउ होला । रमाइलो र खुसीले भरेको समय छ अहिले तपाइको । दाम्पत्य जीवनमा खुसियाली छाउनेछ । साझेदारीका समस्या अलि सुल्झनाले हल्का महसुस होला । मेहनत गर्दा बिस्तारै काम बन्नेछ । काम र नाम बनाउने समय छ । जो संग पनि काम गर्न रुचि होला । काम बने पनि सन्तुष्टता भने ठिक ठिकै मात्र रहनेछ । अरुको सानो सहयोग पनि नपाउदा रिस उठेको जस्तो होला । माया गर्ने मान्छेहरुको याद आउला अलि संबेदनशील बनाउन सक्छ । तपाइको रासी मिथुन हो जुन बुद्ध ग्रहको रासी हो त्यसैले बुद्धको रंग जस्तै हरियो राम्रो हुन्छ ।
कर्कट (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) – पशुपालन तथा कृषि क्षेत्र विकास, सुधार संसोधन देखिन्छ । चुनौतीहरु पन्छाउँदै अघि बढ्नुपर्ने जस्तो स्थिति आउन सक्ला । अनुकुल–प्रतिकुल स्थिति दुवै आउन सक्ने हुन्छ । आजको दिन परिवर्तन ल्याउन सक्ने दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ । सतर्क नभए अरुले त्यतिकै फसाउन सक्छन् । चलाखी गरे असाद्द्य कामहरु पनि सहज रुपले बन्ला । पैसाको जरुरी भए जहाँबाट पनि मिलाउन सकिएला । तपाइको रासी कर्कट हो जुन चन्द्रमाको को रंग जस्तै सेतो, गुलाबी,फिक्का राम्रो हुन्छ ।
सिंह (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) – ढाड आदि दुखेको भए निको होला वा छिट्टै निको हुनेछ । धेरै विद्युतीय उपकरण चलाउनु पर्ने काम आउला । टाढा टाढाको यात्राको अबसरहरु भने आउन सक्ने हुन्छ । थोरै लाभको मात्र सम्भावना देखिन्छ । आफ्नो दाइ वा दिदि भन्नु पर्ने मान्छेहरुको साथ र सहयोग पाउनु सट्टा झन् उनीहरुले काम कुरा ढिला पार्लान । सब थोक लुटाउन मन भएको जस्तो होला । धर्म कर्म, पुजा पाठमा मन होला । समाचार आदि पढ्ने मन होला । मिलनसार साझेदारहरु संग भेट होला । तपाइको रासी सिंह हो जुन सुर्यको रासी हो त्यसैले सुर्यको रंग जस्तै सुन्तला, रातो, सुन रंग राम्रो हुन्छ ।
कन्या (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) – जग्गामा विशेष योजना गर्नु पर्ने जस्तो हुने हुन्छ । रमाइलो जमघट हुने जस्तो बातावरण देखिन्छ । सहयोगीहरूले केही समस्या भने बढाउन सक्छ । केही दौडधुप गर्नुपर्ला र संघर्ष गर्नु पर्ला । कमजोरी सुधार्दै अघि बढ्दै जानु पर्नेछ । यदि नसुधारे अफ्फैलाई गाह्रो होला । पारिवारिक सुख दुखका कुराहरु सुन्न सकिएला । कृषिहरुको लागि भनेको जस्तो राम्रो दिन छ । कल कारखानामा कामहरु धेरै बढ्नाले खुसीको माहोल हुने छ । तपाइको रासी कन्या हो जुन बुद्ध ग्रहको रासी हो त्यसैले बुद्धको रंग जस्तै हरियो राम्रो हुन्छ ।
तुला (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) – आजको दिन महत्त्वपूर्ण हुने छ । पराक्रमद्वारा असाद्द्य कामहरु पनि बन्ला । शिक्षा पढाई लेखाइमा सुभ–असुभ दुबै देखिन्छ । सम्मानीय जनको लागि चाजो बाजो मिलाउनु पर्ला । नाति पनातिको सम्झना आउला । असाद्द्य काम कुराहरु बनाउनु पर्ने हुन सक्छ । राम्रो अवसरको खोजीमा भौतारिनु पर्ला । आफ्नो काम आफुले भन्दा पनि अरुले गरिदिने जस्तो होला वा आफु भन्दा अरु बढी इच्छुक होला । भाइ बहिनीहरुले साथ दिदा आत्मीय आनन्द पाउने होला । तपाइको रासी तुला हो जुन शुक्र ग्रहको रासी हो त्यसैले शुक्र ग्रहको रंग जस्तै सेतो, उज्यालो रंग, फिक्का राम्रो हुन्छ ।
बृश्चिक (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) – भान्छामा काम धेरै बढेर जाला । मिठो मिठो खाना मन होला । ब्यापारीहरुको लागि राम्रो छ । बैक आदिको काम गर्नु पर्ला । व्यवसायको सन्दर्भमा सुभ देखिन्छ । अनुकुल स्थिति आउन सक्ने हुन्छ । कृषिकर्म आदि काममा मनग्गे लाभ हुनेछ । व्यावसायिक काममा मनग्गे लाभ हुनेछ । व्यापार लगायत अनि क्षेत्त्रमा राम्रो देखिन्छ । कर्जा लिनुपर्ने हुन सक्छ । तपाइको रासी बृश्चिक हो जुन मंगल ग्रहको रासी हो त्यसैले मंगल ग्रहको रंग जस्तै रातो, कलेजी राम्रो हुन्छ ।
धनु (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे) – अरुको सानो सहयोगले धेरै खुसि होला । आफुलाई र अरुलाई बराबर सम्मानले आउने हुनेछ । सुखको समय भएपनि किन किन खल्लो भएको जस्तो होला, निरास नहुनु होला । रोकिएका काम धेरै नभए पनि सक्ने जति बनाउन सकिनेछ । धेरै बोल्दा समस्या आउन सक्छ । अर्थको अनर्थ सोच्लान । मेहनत गर्दा काम बन्न सक्छ । अरूका व्यवहारमा चासो लिँदा व्यर्थैमा झमेला बेहोर्नुपर्ला । निर्णय गर्ने दक्ष्यता आफै आउनेछ । माया गर्ने मान्छेहरुको याद आउला । मित्रहरु वा कोहि पनि चाहिदैन एक्लै ठिक छु भन्ने हुन्छ । तपाइको रासी धनु हो जुन बृहस्पति ग्रहको रासी हो त्यसैले बृहस्पति ग्रहको रंग जस्तै पहेको, सुन रंग राम्रो हुन्छ ।
मकर (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि) – अकस्मात पैसाको आबश्यकता होला । के खाउ के खाउ हुन सक्छ । रमाइलो दिनको सुरु भएको देखिन्छ । ऋण आदि दिनु पर्ने कुराहरु भए दिन सकिएला । प्रतिस्पर्धीहरूले समस्या निम्त्याउने हुँदा सतर्क रहनु होला । ठुलो बाधाहरु हटाएर प्रगतिको मार्ग प्राप्त हुने बाटोहरु खोल्नेछन । तिर्थ यात्राको कुरा आउला वा जान पाइएला । नया नया काम कुराहरु आउला । विभिन्न काम, कार्यक्रम आदिमा सहभागी हुन पाउला । तपाइको रासी मकर हो जुन सनी ग्रहको रासी हो त्यसैले सनी ग्रहको रंग जस्तै कालो, निलो राम्रो हुन्छ । टिप्पणी कहिले कहिले सनिको नराम्रो दसाको बेला ज्योतिषले कालो, निलो रंग नलगाउ भन्यो भने नलगाउदा हुन्छ ।
कुम्भ (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द) – मन भएको ठाँउमा घुमफिर गर्न पाउने छ किनकि त्यस्को समय आएको छ । गीत गाउन वा गीत सुन्न मन भएर आउछ वा गाउन सुन्न पाइएला । छोरा छोरीहरुले आमा बुवा भनेर सम्झेलान । हाल खबर सोध्लान । परीक्षा आदिको कुराले उत्साह बढाउनेछ । आफ्नो दाइ दिदि आदि संग भेटघाट वा जमघट हुन सक्छ । अलि कति रमाइलो वा खुसियाली जस्तो बढने बातावरण आएको छ । गीत संगीतमा मन जानेछ । तपाइको रासी कुम्भ हो जुन सनी ग्रहको रासी हो त्यसैले सनी ग्रहको रंग जस्तै कालो, निलो राम्रो हुन्छ । टिप्पणी कहिले कहिले सनिको नराम्रो दसाको बेला ज्योतिषले कालो, निलो रंग नलगाउ भन्यो भने नलगाउदा हुन्छ ।
मीन (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) – व्यापार लगायत अनि रोजगार, जागिर क्षेत्त्रमा राम्रो देखिन्छ । यसो कतै जाने मन नहुने होला । बाहिर गएर आउनु पर्नेमा बाहिर बाहिर नै थन्किन सकिएला । आगन्तुक आदिको वा आगमनको संकेत आउला, तयार गरि राख्दा पछि सहज होला । पितृ बर्गको सुखमा वृद्धि होला । दिगो योजनामा अघि बढ्दा यो समय उपयोक्त छ । श्रमको मूल्यांकन हुनेछ । श्रम अनुसार प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । तपाइको रासी मिन हो जुन बृहस्पति ग्रहको रासी हो त्यसैले बृहस्पति ग्रहको रंग जस्तै पहेको, सुन रंग राम्रो हुन्छ ।
‘युनिटी वृहत साँस्कृतिक’ महोत्सव आजदेखि
बैतडीका स्थानीय तहहरु सुशासन समितिविहीन
कञ्चनपुरमा चाउमीन खाँदा दुई बालकको मृत्यु
जनताको कर हुँदैंछ दुरुपयोग,घर हुँदाहुँदैं घरभाडा लिन्छन सांसद ! [नामावली…
आज आईतवार पाथिभरामाईको मन्दिरलाई एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर राशिफल…